» तेस्रो लहर आए बालबालिकालाई ‘बढी जोखिम’
काठमाडौं । कोभिड-१९ को तेस्रो लहर छिट्टै आउन सक्ने भन्दै अहिले नै तयारी थाल्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । खोप नलगाएका व्यक्ति र बालबालिका तेस्रो लहरबाट बढी प्रभावित हुने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
डा. बिच्छाले चार महिनाभित्रमा सातवटै प्रदेशमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू), आईसीयूलगायत भएको न्यूनतम २ सय बेडको अस्पताल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बच्चामा इम्युनिटी पावर उसै कम हुन्छ । अहिलेदेखि नै तयारी गरेनौं भने तेस्रो लहर आए सम्हाल्न सक्दैनौं,’ उनले भने । उनले जिल्लास्तरमा समेत बालबालिकाको स्वास्थ्योपचार सहज हुन सक्ने पूर्वाधार गर्नुपर्ने बताए ।
विद्यालयले भौतिक उपस्थितिको सट्टा भर्चुअल (अनलाइन) उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘तेस्रो लहर डिसेम्बरसम्म जान सक्छ । त्यतिबेलासम्म स्कुल खोल्दा जोखिम हुन सक्छ,’ डा. बिच्छाले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले पनि तेस्रो लहर आउनुअघि नै बहुसंख्यक नागरिकमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुका साथै संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले खबर लेखेका छन ।